Happy New Year 2017 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Different » Happy New Year 2017	16
- မင်း ခန့် ကျော်
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Sep 21, 2016 in Think Different | 16 comments
၉ လကုန် ရင် ၁၀ လပိုင်း
နောက် ၁၁ လ
နောက် ၁၂ လ
Happy New Year 2017 လို့များ
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုနိုင်ပါ့မလား?
ပြည်သူများပျော်ရွှင်နိုင်ရေး အတားအဆီးများ ကို အစိုးရကရော ဖယ်ရှားပေးနိုင်မည်လား?
ခု ချိန်ထိတော့ ကျတော့်အနေဖြင့် ဟင့်အင်းဟုေဖြေရပါမည်။
ကျတော်တို့လိုချင်သော ဖြစ်စေချင်သော အစိုးရ တရပ်ကို
အဘက်ဘက်မှ ယိုးယွင်းပြီး ဖြေရှင်းရမည့် သောင်းခြောက်ထောင်
ကြိုတင်တွက်ဆ ထားသည့်အတိုင်း တဦးတည်းကသာ ဒိုင်ခံ
ဖြေရှင်း နေသည်မှာ သည်နေ့အထိပင်။
ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် အတိုင်ပင်ခံ(ဒေါ်စု) သွားသလောက်
နောက်မှ လိုက်ပါနိုင်စွမ်းNLD အစိုးရတွင်မရှိ သည်မှာ
လက်ရှိ အခြေအနေများက သက်သေထူလျက်ရှိနေသည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက် အချိန်ထက်ပင် ဟူ၍
သက်တမ်းနုသေးသည်ဟူ၍လည်း ကျတော့်အနေဖြင့် စောကြော
အနည်းဆုံးတော့ တည်ငြိမ်မူ့ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး ပိုင်းကို
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၌ ပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သင့်သည်။
သတင်းမီဒီယာ ပိုင်း၌ လက်သွက်ခြေသွက် သွားသင့်သည်။
ပညာရှင်များ များများ နှင့် ခပ်သွက်သွက် ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးဖြစ်သင့်
ခုတော့ အမေ အမေ ဒေါ်စု ဒေါ်စု
အစကတည်းက ကျတော်မြင်မိတဲ့ ဒေါ်စုအစိုးရအဖွဲ့ မှာ
Happy New Year 2017 လို့ အားရပါးရ
ကြိုဆိုနိုင်ဖို့ ၃ လ အတွင်းတော့ မျော်လင့်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ……
About မင်း ခန့် ကျော်
has written 81 post in this Website..
View all posts by မင်း ခန့် ကျော် →	Blog
kai says: စိတ်စောနေတယ်ဆိုတာ အဲမှာပေါ်တာပဲ..
ဘယ်နှာ.. စက်တင်ဘာတောင်မကုန်သေး.. ဟက်ပီနယူးရီးယားနေတာ..။
အတွေးအခေါ်တို့၏ မူလအမြုတေသည် ဘာသာရေး..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: မနေ့ညက ( မြန်မာအချိန်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ မိန့်ခွန်းလေး မြန်မြန်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11634
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဘာသာရေး ကြောင့်လို့ပြောမယ့်အစား
မင်း ခန့် ကျော် says: ယုံကြည်စရာ အနာဂါတ်မရှိရင်
လူဆိုတာ ပျက်ဆီးတတ်တယ် တဲ့။
ဆောင်းဦးလှိုင် စာသားလေး. 😁😁😁
ဦးကြောင်ကြီး says: မြေအိုးNDF
မင်း ခန့် ကျော် says: ဆစ်တပ်ကျပ်ကျီးလွှတ်လိုက်ရမား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ဇီဇီခင်ဇော် says: စက်တင်ဘာပဲရှိသေးတယ်။
ဟက်ပီးနယူးရွား ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဒေါ်စု အစိုးရကို အပြစ်တင်ဖို့ဆွာ တော်ရုံစကေးနဲ့တော့မရဘူးးး
မင်း ခန့် ကျော် says: အဖြေမရှိသေးတဲ့ မေးခွန် များမေးမိတာမို့. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ဒေါ်စုအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ ၀န်ကြီးတချို့တွေနဲ့တွေ့ပြီး.. စကားပြောပြီးပြီ…။
အချိန်နည်းနည်းတော့စောင့်ပေါ့….။ ၅နှစ်အစိုးရသက်တမ်း.. မှာ.. ၁နှစ်ဆိုရင်တော့.. အဖြေတခုထုတ်လုိ့ရမယ်ထင်မိတာပဲ..။
ကိုရင်က.. တခြားပါတီကဆိုရင်တော့.. အစိုးရလုပ်သမျှအကုန်ထိုင်ဝေဖန်ပေတော့…။
ကျုပ်က.. ဒေါ်စုကို လစ်ဗရယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမို့.. ကိုရင်က.. လစ်ဗရယ်.. ဘယ်မှာ.. အစွန်းဖက်နဲနဲနင်းပြောလေ.. နေရာရအောင်မြင်လေဖြစ်လာမှာပဲလို့ထင်မိတာပဲ..။
ညာဖက်တော့ မသွားစေလို..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ဇီဇီ says: +1
လူတော်တော်များများ အစွန်းနင်းပြီးသာ ပြောချင်ကြတာရယ်။
ဘယ် အစွန်းနင်းပြောရမယ် မသိတာများတယ်။
အဲလို ဘယ်အစွန်းကို ဘယ်လိုနင်းပြီး ဘယ်လိုပြောရမယ် ဆိုတဲ့ အစွန်းနင်း စကေးကျတော့ ဒို့ တဂျီး ကို ဘူ မှ မမှီဘူးရယ်။
မင်း ခန့် ကျော် says: ဦးဝင်ထိန် လို မျိုး နဲ့တူပါတယ်သူကြီးရေ။
ဒါပေသိ ဦးဝင်ထိန် မဆဲသင့်။
ဦးဝင်းထိန် မထုတ်သင့် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: အစိုးရတဲ့ အစိုးရဖြစ်တာ ရှိတာ
မင်း ခန့် ကျော် says: အစိုးရဆိုတာ လောလောဆယ်
သဌေးက ခန့်ထားတဲ့ မန်နေဂျာ လောက်ပဲမို့……
မန်နေဂျာ ကြိုးစားသလောက် ရမဲ့အကျိုးက သဌေးအတွက်ပဲမို့…
ကျွန်တော်ယုံကြည်တာက ဒေါ်စု ဒီထက်ဖောက်ထွက်နိုင်မယ်လို့…….
kai says: ဒေါ်စုကဖေါက်ထွက်လိုက်ပြီပဲ…။
၆လနဲ့ ဒီလောက်သွားတာ.. တော်တော်မြန်တယ်ဆိုရမယ်..။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးကို.. သမ္မတက ခန့်တာပါနော..။
ကက်ဘိနက်ကိုသမ္မတကသာ အုပ်ချုပ်စီမံတာဖြစ်တာမို့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 943
မင်း ခန့် ကျော် says: သဌေးက လုံခြုံရေးအတွက်
ကျတော်ပြောချင်တာက စီးပွားရေး ဗျ သူကြီးရေ…..
Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: တိုင်းပြည်လည်ပါတ်ငွေအများစုကြီးက.. ခရိုနီနဲ့.. တပ်သူဌေးတွေလက်ထဲမှာရောက်နေတာ…။
အဲဒီငွေတွေက.. ဒေါ်လာငွေအဖြစ်လှည့်လို့မရတော့.. အသေတွေဖြစ်နေတာ..။
အခု.. ယူအက်စ်ဆန်ရှင်ရဲ့.. SDN List အများကို လွှတ်လိုက်ပြီလေ..။
ပိုသေချာချင်ရင်တော့.. ဒေါ်စုတို့ပေါ်လစီနဲ့ချိန်ဆပြီး.. ငွေတွေဆွဲထုတ်လည်ပါတ်စေရမယ်..။
ဥပမာ..။ အရင်စစ်အစိုးရက.. နေပြည်တော်မြို့ကြီးဆောက်ခိုင်းတာမျိုး…
ကျုပ်ဆိုရင်တော့.. မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို.. မြန်မာခရိုနီတွေကို ဆောက်ခိုင်းတယ်..။ Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.